Tambo yesimbi ine dhizaini yakabudirira yeApple Watch | Ndinobva mac
Tambo yesimbi ine dhizaini yakabudirira yeApple Watch
Zviri pachena kuti nyika yemabhande eiyo Apple Watch Iyo haina magumo uye isu tinogona kuwana mitsva mitsva isina kumboonekwa kare. Chinhu chimwe chete ichocho chakaitika kwandiri pandakawana tambo iyo nhasi ndinoda kukuratidza kunaka kwayo.
Iyo tambo yesimbi iyo iwe yaunogona kutenga mune mana akasiyana anodized ekupedzisa, ayo akagadzirwa pasi pechirevo chehuchi hwenyuchi uye hwakagadzirwa nezvidimbu zvakasiyana zvakave zvakaremerwa kuita tambo yekupedzisira.
Kana iwe uchida tambo dzeApple Watch yako, ndeyechokwadi kuti ichave imwe yeayo iwe yauchadanana neyakanyanya, uye ndeyekuti mhedzisiro yainopa pachiuno paunenge uchipfeka inoshamisa. Sezvauri kuona mumifananidzo uye sekutsanangura kwandamboita, Mazana emapoligoni akaumbwa zvidimbu ave achishandiswa akapindirana kuti agadzire inochinjika uye yakanyatsorongedzwa tambo.
Kuvharwa kwayo kunopa chengetedzo yakawedzerwa kuitira kuti tigone kuva nechokwadi chekuti haizovhurike tichiri nayo. Kune mavara mana akanyatsosiyaniswa pakati peayo ainayo, goridhe, iro rose goridhe, sirivheri uye inopenya simbi nhema. Iyo anchorage kuApple Watch inotevera chirevo chakafanana neicho cheiyo Apple tambo.
Mutengo wacho ndewe 13,69 euros Uye iwe unayo iyo inowanika kune maviri aripo Apple Watch makesi, iyo 38mm uye iyo 42mm. Saka kana uchingoona ichi chinyorwa chakubata iwe uye wauya pano uchiverenga, ini ndinokukurudzira kuti ushanyire iyo next link uye kuti iwe tenga yako izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tambo yesimbi ine dhizaini yakabudirira yeApple Watch
Iyo drone uye kamera kambani DJI inoenderana zvakanyanya neApple kupfuura isu zvatinofunga?
9x11 Podcast: Zvese Nezve NAS Maitiro